DNS ဆာဗာသည် Windows 10 တွင် တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါ- ၎င်းကို ပြုပြင်နည်း | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
အာရုန်သည် Rivas | 29/11/2021 09:08 | အင်တာနက်ကို, Windows ကို
အင်တာနက်ကို မကြာခဏ သုံးစွဲလေ့ရှိတဲ့ သုံးစွဲသူတွေကို ဒုက္ခပေးလေ့ရှိတဲ့ ပြဿနာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ အဲဒါပါပဲ။ "DNS ဆာဗာသည်တုံ့ပြန်မှုမရှိပါ။ " ၎င်းသည် စာမျက်နှာများကို ဖွင့်ခြင်းမှ တားဆီးထားသောကြောင့် အတွေ့အကြုံကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ ကံကောင်းစွာဖြင့်၊ သင့်တွင် ထိုမက်ဆေ့ချ်ကို အဆုံးသတ်နိုင်သော ဖြေရှင်းချက်များစွာမရှိပါက၊ သင့်တွင် Windows 10 အတွက် လုပ်ဆောင်သည့်အရာများကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဒီတစ်ခါတော့ သူတို့ဘာတွေလဲဆိုတာ သင်ပြမယ်။ DNS server က တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိကြောင်း ညွှန်ပြသော မက်ဆေ့ချ်ကို ပေါ်မလာစေရန် သင်အသုံးချနိုင်သည့် လက်တွေ့အရှိဆုံး ဖြေရှင်းနည်းများ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် ပုံမှန်နည်းလမ်းအတိုင်း သွားလာနိုင်သည်၊ သို့သော် DNS ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ၊ ဘာကြောင့် ဤပြဿနာမျိုး ဖြစ်ပွားရသည်ကို မရှင်းပြမီတွင် ဖြစ်သည်။ လုပ်သာလုပ်!
1 DNS ဆိုတာဘာလဲ။
2 Windows 10 တွင် "DNS ဆာဗာသည် မတုံ့ပြန်ခြင်း" မက်ဆေ့ချ်ကို မည်သို့ပြုပြင်မည်နည်း။
2.1 အခြားဝဘ်ဘရောက်ဆာကို စမ်းသုံးကြည့်ပါ သို့မဟုတ် သင်အသုံးပြုပြီးသားတစ်ခုကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။
2.2 Antivirus နှင့်/သို့မဟုတ် firewall ကို disable သို့မဟုတ် disable လုပ်ပါ။
2.3 Safe Mode တွင် သင့်ကွန်ပျူတာကို ဖွင့်ပါ သို့မဟုတ် ပြန်လည်စတင်ပါ။
2.4 Windows 10 ၏ Peer-to-Peer အင်္ဂါရပ်ကို ပိတ်ပါ။
2.5 Router ကို ပြန်လည်စတင်ပါ။
စပိန်ဘာသာဖြင့် ခွဲခြမ်းထားသော DNS (ဒိုမိန်းအမည်စနစ်၊ ၎င်း၏အတိုကောက်) သည် domains များသို့အမည်များသတ်မှတ်ရန်ပြုလုပ်ထားသောဘာသာပြန်တောင်းဆိုမှုများကိုဖြေရှင်းရန်တာဝန်ရှိသောစီမံခန့်ခွဲသူအမျိုးအစား၎င်းတို့သည် အခြေခံအားဖြင့် ဝဘ်စာမျက်နှာများ၏ URL များဖြစ်သည်။ www.movilforum.com o www.google.comဥပမာအချို့ကို ပေးလိုပါသည်။
မေးခွန်းမှာ DNS သည် ဒိုမိန်း သို့မဟုတ် လက်ခံသူအမည်ကို ယူကာ ၎င်းကို ဂဏန်း IP လိပ်စာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ဝဘ်စာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်ရန် တောင်းဆိုသောအခါတွင် အချက်အလက်များ ပြန်လည်ရရှိရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်မအောင်မြင်ပါက၊ DNS ဆာဗာသည် တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိကြောင်း ညွှန်ပြသောအစတွင် ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သော မက်ဆေ့ချ်ပေါ်လာပါမည်။
Windows 10 တွင် "DNS ဆာဗာသည် မတုံ့ပြန်ခြင်း" မက်ဆေ့ချ်ကို မည်သို့ပြုပြင်မည်နည်း။
ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့်အရာများစွာရှိပြီး၊ လက်တွေ့အကျဆုံး၊ ပုံမှန်နှင့်အထိရောက်ဆုံးကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
အခြားဝဘ်ဘရောက်ဆာကို စမ်းသုံးကြည့်ပါ သို့မဟုတ် သင်အသုံးပြုပြီးသားတစ်ခုကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။
သင်ပထမဆုံးလုပ်သင့်သည်နှင့် ၎င်းသည် သင်နှစ်သက်ရာ ဝဘ်ဘရောက်ဆာအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပြဿနာကို ဖယ်ရှားရန် အလုပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူမှ ထုတ်ပြန်ထားသော နောက်ဆုံးရနိုင်သည့် အပ်ဒိတ်ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ မဟုတ်ပါက၊ ၎င်းကို နောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့ အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီး "DNS server is not response" နှင့် အခြားစာတိုကို သင်လက်ခံရရှိသည့် ဝဘ်စာမျက်နှာသို့ ပြန်သွားရန် ကြိုးစားပါ။ ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်၊ သင်သည် ဘရောက်ဆာဆက်တင်များကိုဝင်ရောက်ပြီး အပ်ဒိတ်ကဏ္ဍသို့သွားရပါမည်။ (အဆင့်များသည် တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ကွဲပြားနိုင်သည်)။
ပြproblemနာဆက်ရှိနေသေးလျှင်, သင်အသုံးပြုသည့် ဝဘ်ဘရောက်ဆာတွင် အနာဂတ်မွမ်းမံမှုဖြင့်သာ ဖြေရှင်းနိုင်သည့် ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ ဝဘ်စာမျက်နှာ သို့မဟုတ် ဒိုမိန်းတွင် ဖော်ပြထားသည့် ဘရောက်ဆာနှင့် ဖြေရှင်းရန် ပြဿနာများ ရှိနေခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အခြားဘရောက်ဆာကိုသုံးကြည့်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Mozilla Firefox ဖြင့် မက်ဆေ့ချ်ထွက်လာပါက၊ Google Chrome ကို စမ်းသုံးကြည့်ပါ သို့မဟုတ် အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ ဒါက ဖြေရှင်းချက် ဖြစ်နိုင်တယ်။
Antivirus နှင့်/သို့မဟုတ် firewall ကို disable သို့မဟုတ် disable လုပ်ပါ။
Antivirus များသည် Windows 10 ကွန်ပြူတာ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာကို အနှောင့်အယှက်ပေးလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အထက်ပါအချက်များသည် အလုပ်မဖြစ်ပါက၊ ၎င်းကိုပိတ်ထားရန်ကြိုးစားပါ သို့မဟုတ် ၎င်းကိုပိတ်ရန်ကြိုးစားပါ။အတူတူပဲဖြစ်မှာပါ။ တစ်ဖန်၊ သင့်တွင် firewall ရှိပါက၊ ၎င်းသည် Windows 10 နှင့်ပါလာသည်ဖြစ်စေ မသက်ဆိုင်ဘဲ ၎င်းကိုလည်း disable လုပ်ရပါမည်။
Antivirus ကိုပိတ်ရန် Avast ၏အခြေအနေတွင်၊ ထိုနေရာတွင်ပေါ်လာသော icon များနှင့်အချိန်နှင့်ရက်စွဲဘေးရှိ task bar တွင်ရှိသော up arrow ကိုနှိပ်ရပါမည်။ ထို့နောက် အခြားအိုင်ကွန်များပါရှိသော မီနူးတစ်ခုကို ပြသပါမည်။ ထိုနေရာတွင် Avast ကို ညာကလစ်ဖြင့် နှိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် Avast Shield Control option တွင် သင်တန်းကို ရှာပါ၊ ထို့နောက် မက်ဆေ့ချ်ရှိမရှိ နောက်ဆုံးတွင် စမ်းသပ်ရန် ထိုနေရာတွင် ပြသထားသည့် မည်သည့်ရွေးချယ်မှုမျိုးကိုမဆို ရွေးချယ်ပါ။ "DNS ဆာဗာက မတုံ့ပြန်ပါ" ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးစားသောအခါတွင် ပေါ်လာသည်။
Antivirus ကို ပိတ်လိုက်ခြင်း၏ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အခြားသူများနှင့် ကွဲပြားနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို ကိုးကားချက်အဖြစ်သာ ယူသင့်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, Antivirus ကို ယာယီပိတ်ထားဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။၎င်းသည် malware နှင့် spyware ကဲ့သို့သော အန္တရာယ်ရှိသော ပရိုဂရမ်များမှ ကွန်ပျူတာအတွက် အကာအကွယ်ပေးသောကြောင့်၊
ယခုအတွက် Windows firewall ကိုပိတ်ပါ။ သင်ဝင်ရောက်ရန်သာရှိသည်။ စတင်ပြုလုပ်ခြင်း (ကီးဘုတ်ပေါ်ရှိ Windows ခလုတ်ဖြင့် သို့မဟုတ် ဘယ်ဘက်အောက်ထောင့်ရှိ Windows ခလုတ်ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့်) > configuration ကို > Update နှင့်လုံခြုံရေး > Windows လုံခြုံရေး > Firewall နှင့်ကွန်ယက်ကာကွယ်မှု > ဒိုမိန်းကွန်ယက် > Firewall ကို ပိတ်သည်အထိ ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ ၎င်းကို ယာယီသာ ပိတ်ထားရန်လည်း အကြံပြုထားပါသည်။
Safe Mode တွင် သင့်ကွန်ပျူတာကို ဖွင့်ပါ သို့မဟုတ် ပြန်လည်စတင်ပါ။
El Windows 10 Safe Mode (အခြားနောက်ထွက်ဗားရှင်းများအပြင် Windows 11 တွင်ပါ) သည် ပြင်ပပရိုဂရမ်များမှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် ကွန်ပျူတာသည် စနစ်အရင်းအမြစ်များနှင့် ဖိုင်များကို လက်တွေ့ကျကျဖြင့်သာ စတင်လုပ်ဆောင်သည် သို့မဟုတ် ပြန်လည်စတင်သည့်မုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် "DNS server is not responding" ၏ ပြဿနာဖြစ်စေနိုင်သော အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ။
Windows 10 တွင် သင့်ကွန်ပြူတာကို Safe Mode တွင် စတင်အသုံးပြုနိုင်သည့် နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ အရိုးရှင်းဆုံးကတော့ Start ကိုသွားပြီး off ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ menu ကိုရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူ ရပ်ဆိုင်းထား, ပိတ်ရန် y ပြန်လည်စတင်ပါRestart ဖြစ်သည့် ကီးဘုတ်ပေါ်ရှိ Shift ခလုတ်ကို အချိန်အကြာကြီး တပြိုင်နက် မနှိပ်မီ နောက်ဆုံးတွင် သင်နှိပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ပေါ်လာသော အပြာရောင်ဝင်းဒိုးတွင်၊ သင်ကလစ်နှိပ်ရပါမည်။ Troubleshoot > အဆင့်မြင့်ရွေးချယ်မှုများ > ပြန်လည်စတင်ပါ. ပြန်လည်စတင်ရန်အတွက်စက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်၊4သို့မဟုတ်5အကြားကိုနှိပ်ရန်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဘေးကင်းသောမုဒ်ကိုဖွင့်ပါ။ y ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ဘေးကင်းသောမုဒ်ကို ဖွင့်ပါ။အသီးသီး။ နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းသည် ပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်သည်။
Windows 10 ၏ Peer-to-Peer အင်္ဂါရပ်ကို ပိတ်ပါ။
Peer-to-Peer သည် Windows 10 တွင်သာ တွေ့ရသော အရာဖြစ်သည်။ လည်ပတ်မှုစနစ်၏ ယခင်ဗားရှင်းများတွင်လည်း မဟုတ်ပါ။ ပိတ်ရန် စတင်ပြုလုပ်ခြင်း (ကီးဘုတ်ပေါ်ရှိ Windows ခလုတ်ဖြင့် သို့မဟုတ် ဘယ်ဘက်အောက်ထောင့်ရှိ Windows ခလုတ်ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့်) > configuration ကို > Update နှင့်လုံခြုံရေး > ဖြန့်ဝေခြင်း ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း > ခလုတ်ကို ပိတ်ပါ။ အခြားကွန်ပျူတာများမှ ဒေါင်းလုဒ်များကို ခွင့်ပြုပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သင့်ကွန်ပြူတာကို restart ချလိုက်ပါ။
Router ကို ပြန်လည်စတင်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ယခင်အကြံပြုချက်များသည် အလုပ်မဖြစ်ပါက၊ အခြားလုပ်ဆောင်ရန်ကျန်ရှိနေပါသည်။ router သို့မဟုတ် router ကို reboot လုပ်ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်၊ ၎င်း၏ cache သည် လုံးဝရှင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ Windows 10 တွင်ပေါ်လာသည့် DNS server မှ မက်ဆေ့ချ်ကို တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိစေဘဲ ယခင်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အင်တာနက်ကို » DNS ဆာဗာသည် Windows 10 တွင် တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါ- ၎င်းကို မည်သို့ပြုပြင်မည်နည်း။